Igwe ihe ojoo na emetuta Health - Foundation Foundation
Home Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-emetụta Ahụ Ike
Ndị ọkachamara ahụike na-akọ na ịrị elu dị elu nke ọrịa psychiatric na nsogbu nhụjuanya nke ndị na-eto eto taa. Ọtụtụ ndị okenye na-enwekwa nsogbu ahụ ike mmekọahụ. Ọ bụ eziokwu na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-emetụta ahụ ike? Nnyocha na-egosi mmetụta nke iji ike ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na ahụike uche. Ọnọdụ ndị a na-emetụta ụmụ nwoke karịsịa. A 2015 Review site Ịhụnanya et al. ekwu
Ozi ọma ahụ bụ na mgbake ga-ekwe omume. Ọ na-enyere aka ma ị ghọta otú ụbụrụ si agbanwe ka ị na-ahụ ihe dị iche iche na ndụ gị.
N'akụkụ a, Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ ahụ na-ewebata ọtụtụ ụzọ anyị nwere ike isi metụta ahụike anyị site n'iji ịntanetị eme ihe. Anyị na-elekwasị anya n'ịntanetị.
Inwe ike ịntanetị nwere ike ịgbanwe ụbụrụ ma gbanwee ahụ mmadụ. Ọ nwere ike iduga ndị mmadụ ka ha nwee nsogbu nsogbu mmekọahụ gụnyere ịṅụ ọgwụ ọjọọ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, foto ndị gba ọtọ na-emetụta ahụ ike. Anyị na-egbochi nsogbu ndị a na ibe ndị na-esonụ.